WHO ayaa gargaar u dirtay Libya iyada oo la raacayo diyaaradda Suuriya - teles relay
Hay'adda Caafimaadka Adduunka (WHO) waxay adeegsatay diyaarad Siiriya laga leeyahay oo cunaqabateyn Mareykanku saaray ku rartay gargaarka bani'aadamnimo ee Libya.
WHO ayaa sii deysay sawirka diyaarad Cham Wings ah oo ay u adeegsan jirtay inay ka qaado 16 tan oo daroogo iyo sahay ah bakhaarada ay ku leedahay magaalada Dubai iyadoo la geynayo magaalada labaad ee Libya ee Benghazi.
Wakiilka ururka ee Libya, Elizabeth Hoff, waxaa loo diray Syria muddo 2012 sano ah laga bilaabo XNUMX.
Markabkan gaarka loo leeyahay ee Siiriya ayaa cunaqabateyn la saaray Mareykanka sanadkii 2016 kadib markii uu waday hub iyo dagaalyahano shisheeye si ay u taageeraan ciidamada Madaxweyne Bashar al-Assad ee ka dhanka ah mucaaradka.
Cham Wings ayaa la rumeysan yahay inuu ka tirsan yahay seediga Mr. Asad.
Robert Pattinson Wuxuu Kala Baxay FKA Laamo Sababtoo ah Kristen Stewart - Video
Laga bilaabo 2021, alaab-qeybiyeyaasha iyo adeeg-bixiyeyaasha ka socda Gobolka Cameroon ee dhibaatada ku qaba maamulka canshuuraha dib dambe lama siin doono